राजा बिरेन्द्रकी छोरी श्रुतीबारे थाहा नभएका यी ४ अ’ चम्मका रह’स्यहरु, कस्ती थीइन उनी ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/राजा बिरेन्द्रकी छोरी श्रुतीबारे थाहा नभएका यी ४ अ’ चम्मका रह’स्यहरु, कस्ती थीइन उनी ? (हेर्नुहोस भिडियो)
जेठी छोरी गिर्वाणी यतिखेर २१ वर्षकी पुगिसकेकी छिन् भने कान्छी छोरी सुरगंना १९ वर्षकी पुगिसकेकी छिन् । उनीहरु हाल भारतमा अध्ययरत रहेका छन् । २०६९ सालमा डा खगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमा गिर्वाणी आफ्नो पितासँग देखिएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा पिता र छोरी दुवैको आँशु थाम्न सकेनन् । थोरै समयको बसाईपछि उनीहरु उक्त कार्यक्रमबाट हिडि हालेका थिए । नेपाल आउँदा उनीहरु महेन्द्र मञ्जिलमा जाने गर्छन् । उक्त मञ्जिलमा पुर्व बडा महारानी रत्ना शाह बस्दै आइरहेकी छिन् । उक्त ठाउँमा उनीहरु रत्नासँग केही समय भने पनि रमाउने गर्छन् । हेर्नुहोस
नेपालमा का*ज क्रि*या गरिएकी महिला साउदीको जे*लमा, पत्रकार कुशलभले फोन मार्फत महिला संग कुरा गरे । (हेर्नुहोस भिडियो)